Garoonka Aadan Cadde oo maanta laga soo dajiyay dhaawacyo laga keenay magaalada Gaalkacyo (SAWIRO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Garoonka Aadan Cadde oo maanta laga soo dajiyay dhaawacyo laga keenay magaalada Gaalkacyo (SAWIRO)
Waxaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kasoo degatay diyaarad yar oo siday dad dhaawac ah oo ay tiradoodu gaareyso ku dhawaad 20 qof, kuwaas oo dhaawacyo kala duwan kasoo gaaray dagaaalka maalintii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Dhaawacyadaas oo isugu jiray askar iyo dad shacab ah ayaa ka koobnaa rag iyo haween, waxaana laga soo qaaday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaas oo mudooyinkii ugu dambeysay ay ka socdeen dagaalo u dhaxeeyay ciidamada Galmudug iyo Puntland.
Ciidamada Galmudug iyo Puntland ayaa weli isku hor-fadhiya galbeedka magaalada Gaalkacyo, iyadoona waqtiyada qaar goobahaas laga maqlaayo rasaas goos goos ah oo ay labada dhinac is dhaafsanayaan, inkastoo xaaladda magaaladaasi ay maanta ka degan tahay sidii ay maalintii shalay ahayd.
Gaadiid nooca gar-gaarka deg dega ah ee loo yaqaano Ambalaasta ayaa waxaa maanta lagu dhex arkay gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaas oo kasoo dejinaayay dhaawacyadda maanta laga keenay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Dhamaan dadkaasi dhaawacyada qaba ayaa la dhigay xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho.